ZoomInfo: Manafaingana ny fantsona B2B anao miaraka amin'ny angon-drakitra momba ny orinasa ho serivisy (DaaS) | Martech Zone
ZoomInfo: Manafaingana ny fantsona B2B anao miaraka amin'ny angon-drakitra momba ny orinasa ho serivisy (DaaS)
Alakamisy 4, 2021 Alakamisy 4, 2021 Douglas Karr
Raha mivarotra amin'ny orinasa ianao dia fantatrao fa sarotra ny mahita orinasa mety ho azo ary manara-maso ireo mpanapa-kevitra any… mainka fa ny fahatakarana ny fikasan'izy ireo hividy. Ny superstars varotra B2B dia sleuths mahagaga, manao antso aorian'ny antso amin'ny fifandraisana anatiny sy ivelany izay nananganany fifandraisana mba hamantarana ny olona mety amin'ny orinasa mety - amin'ny fotoana mety.
ZoomInfo dia nanangana ny mpitarika manerantany Data ho serivisy (DaaS) sehatra hanohanana ny paikadinao mankany amin'ny tsena na aiza na aiza misy anao na ny mpanjifanao eto amin'izao tontolo izao. ny database firmografika dia ahitana:
106 tapitrisa ny firaketana orinasa
167 tapitrisa ny firaketana fifandraisana
Adiresy mailaka 140 tapitrisa
50 tapitrisa isa mivantana
41 tapitrisa isa finday
Teknolojia 31,000 no voafantina
Tsy lisitra mitongilana io… mihoatra ny 100 tapitrisa ny firaketana fifandraisana no havaozina isan'andro amin'ny alàlan'ny tambajotra mitombo ny mpandray anjara an-tsitrapo izay manamarina na manampy fampahalalana vaovao. fianarana milina (ML) sy ny fanodinana fiteny voajanahary (NLP) dia apetraka ihany koa haka angon-drakitra avy amin'ny loharanom-baovao an-tserasera maherin'ny 38 tapitrisa isan'andro - ao anatin'izany ny tranokalan'ny orinasa, lahatsoratra momba ny vaovao, fandefasana SEC, ary fandefasana asa. Manana mpiasa maherin'ny 400 koa izy ireo izay manamarina sy manatsara ny fitaovam-pikarohana sy ny algorithm mba hampitomboana ny fahamarinan'ny 90% miaraka amin'ny tahan'ny lalao 99.8%.
mampiasa ZoomInfoAmin'ny sehatra, ny orinasanao dia afaka mikaroka, mikendry, ary mahatratra ny vinavina B2B tsara indrindra. Ny fandrakofana, ny marina ary ny halalin'ny ZoomInfo dia ekena ho tsara indrindra amin'ny indostria. Ireo vahaolana ireo dia hanampy ny ekipan'ny varotrao sy ny varotrao hanafaingana ny varotra amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fotoananao hanakatona sy fampitomboana ny fidiram-bolanao isaky ny akaiky. Ny sehatra dia ahitana:
fahiratan-tsaina - Farito ny tsenanao, fantaro ny mpividy mety indrindra, araho ny fikasan'ny mpividy, ary diniho ny antso, ny fivoriana ary ny mailaka handinihana ny fizotranao ho fanatsarana.
Engagement - Fampiharana teratany mora ampiasaina izay manamora ny fifampiresahana sy mifandray amin'ireo mpividy amin'ny fantsonao lehibe indrindra, ao anatin'izany ny mailaka, telefaona, ary chat amin'ny tranokala.
Orchestration - ampitomboina ny vokatra vita amin'ny varotra amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fizotran'ny manual mifototra amin'ny hetsika ivelany sy anatiny mifandraika amin'izany.
Anisan'izany ny endri-javatra ZoomInfo Platform
Contact & Fikarohana orinasa - Farito ny tsena, mitadiava mpividy mety
Ny fikasan'ny mpividy - Mankanesa any amin'ireo efa vonona hividy
Intelligence Resadresaka – Famakafakana ny fifandraisana rehetra
Fifandraisana Intelligence - Raiso ny fifandraisana & fifandraisana
Data-as-a-Service - Ampidiro ny paikady data mitambatra
Sales mandeha ho azy - Manatsara ny fifandraisana amin'ny telefaona sy mailaka
Tranonkala Chat - Famantarana sy araho ny fitarihana mahafeno fepetra
Doka nomerika - Kendrena ny mpihaino namboarina
Workflows - Atombohy ny hetsika mandeha amin'ny tsena
Fampiroboroboana ny fitarika - Ampidiro ny angona amin'ny fotoana tena izy
Integrations - Ampidiro ao anatin'ny rindranasa am-polony ny angona tsara indrindra ao anatin'izany ny Salesforce, MS Dynamics ary Hubspot.
Data tsiambaratelo, mangarahara ary fanarahan-dalàna
ZoomInfo dia mifanaraka tanteraka amin'ny fahazoana, fitazonana ary fikojakojana ny angona orinasa B2B:
ZoomInfo dia nahazo mari-pankasitrahana ISO 27001, ary raisinay ho zava-dehibe ny fiainana manokana sy ny fiarovana ny angon-drakitra. Manaraka fitsipika henjana izahay mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny lalàna farany hatrany ny angon-drakitra voaangonay. Izahay koa dia manana mari-pamantarana manokana amin'ny rafitra fiarovana ny tsiambaratelon'ny EU-US sy Swiss-US. Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny Vondrona Eoropeana, Royaume-Uni, Soisa, ary Etazonia ny fizotry ny famindrana angon-drakitray.
Code of Community an'ny ZoomInfo
ZoomInfo dia mpitarika amin'ny rindrambaiko mandeha amin'ny tsena maoderina, data ary faharanitan-tsaina ho an'ny orinasa maherin'ny 20,000 manerantany.
Atombohy ny andrana ZoomInfo maimaim-poana
Fampahafantarana: Mampiasa rohy mifandraika amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: b2bfikasana mpividy b2bb2b dia ny mpividyangona b2bTakelaka data B2Bfikarohana b2bTakelaka data B2Bangona momba ny orinasafikasan'ny mpividydia nataon'ny mpividyangon-drakitra orinasaresaka faharanitan-tsainadaasdata ho serivisyfananganana dataHafanàm-po an dokam-barotradata firmografikahubspotiso 27001fampitomboana firakams dinamikaangona fikarohanafifandraisana ara-tsainavarotra mandeha ho azyfifampiraharahana amin'ny varotraNy tsenan'ny varotravarotra orkestravarotra workflowssalesforceresaka amin'ny tranonkalazoominfo
Hey DAN: Ahoana no ahafahan'ny Voice to CRM hanamafy ny fifandraisanao amin'ny varotra sy hitazonana anao ho salama
Voucherify: Manomboha fampiroboroboana manokana miaraka amin'ny drafitra maimaim-poana an'ny Voucherify